Mazita echiGerman course
Mhoroi, isu tichadzidza mazita echiGerman echidzidzo mune chino chidzidzo. Isu tichapa mazita echiGerman kosi uye chirongwa cheGerman kosi semuenzaniso. Nekudzidza mazita ezvidzidzo zveGerman zvatichapa pazasi, unogona kuzviitira wega purogiramu yemakosi.
Mazita echiGerman Makosi
Maths: Masvomhu (Mathe)
Chirungu : Chirungu
Dzidzo yemuviri : mutambo
Chitendero tsika: chitendero
Computer: Computer sainzi
Chirongwa cheGerman Kosi
Pazasi pane muenzaniso wechiGerman kosi purogiramu. Iwe unogona kudzidza iwo eGerman kosi mazita pamusoro uye gadzira kosi purogiramu senge iri pazasi.
Mazita echiGerman mazita uye syllabus
Vadiwa shamwari, tasvika kumagumo ehurukuro yedu inonzi mazita echiGerman echidzidzo. Tinovimba ichabatsira. Ndatenda nekuterera kwako.